Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya oo tababar u furtay howlwadeenada wasaaradaasi +SAWIRRO – idalenews.com
Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya oo tababar u furtay howlwadeenada wasaaradaasi +SAWIRRO
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa maanta howlwadeennadeeda u furtay tababar ku saabsan Ahmiyadda iyo waxtarka ay leedahay Hogaaminta wanaagsan.
Tababarkan oo ay iska kaashadeen Wasaaradda Gaashaandhigga iyo xarunta Hogaaminta iyo horumarinta ee magaceeda loo soo gaabiyo RLDC ayaa loogu talagalay sidii kor loogu qaadi lahaa heerka aqooneed ee Howlwadeennada Wasaaradda Difaaca, iyadoo furitaankiisana diiradda lagu saaray Ahmiyadda iyo waxtarka ay leedahay Hogaaminta wanaagsan.
Cabdi Shire oo ka mid ah mas’uuliyiinta soo qabanqaabiyay tababarkana ayaa ka Warbixiyay ujeedada ay ugu talagaleen Siminaarka, isagoo xusay in tabarkan uu ku yimid talada hogaanka sare ee wasaaradda difaaca.
Sii hayaha agaasimaha Guud ee wasaaradda Gaashaandhigga Muuse Cabdulle Maxamuud ayaa furay tababarka, isagoo ka codsaday ka qeybgaleyaasha inay si wanaagsan uga faa’iideystaan mudada uu socdo aqoon isweydaarsiga.
Tababarkaan ayaa socon doona muddo Afar maalmood ah, iyadoo qodobbada kale ee looga doodayana ay ka mid yihiin Habka wadashaqeynta hay’adaha kala duwan ee Dowlada Federalka waajibaadka iyo xuquuqda shaqaalaha, Khilaafaadka goobta shaqada iyo dhismaha sumcadda ay wasaaraddu ku dhex leedahay bulshada.
Tababarkan u bilwday howlwadeennada ka howlgala wasaaradda difaaca ayaa qeyb ka ah dadaallada ay wasaaraddu ku dooneyso inay kor ugu qaado tayada Aqoonta ay u leeyihiin howsha ay ugu xilsaaranyihiin wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.